UDkt uSogo Angel Olofinbiyi noSolwazi uShanta Balgobind Singh bashicilele kwi-International Journal of Criminology and Sociology.
Abezesayensi Yezobugebengu Bashicilele Ucwaningo Ngeqhaza Nendawo ye-COVID-19 Ekudlondlobaleni Kobugebengu Bezobuchwepheshe
Iphepha locwaningo likaDkt Sogo Angel Olofinbiyi noSolwazi Shanta Balgobind Singh boMnyango weziFundo zeSayensi Yezobugebengu noPhenyonzulu elibhalwe ngesifo i-coronavirus nokubhebhetheka kogubengu kwezobuchwepheshe lishicilelwe kwi-International Journal of Criminology and Sociology.
Leli phepha liveza izigameko eziningi ezenzeke emhlabeni ezihambisana nokubheduka kwalesi sifo.
Ukuphazamiseka kwendlela okwenziwa ngayo izinto mihla namalanga kwenze ukuthi abantu benze izinto ngobuchwepheshe, okuvulele abakhwabanisi intuba. Leli phepha lethula uhlaka lwendlela yezokuphepha ukuvikela abantu nezikhungo ekuhlaselweni ngobuchwepheshe bamakhompuyutha. Ababhali baphakamisa ukuthi kube khona izinhlelo zokwazisa nezokufundisa ngezingozi ezikhona ezihambisana nobhubhane i-COVID-19.
Zonke izinhlangano kufanele ziqinisekise ukuthi zinezindlela zokubhekana nengozi uma ivela. Amathimba e-IT nongoti be-inthanethi kufanele bahlale belindele ukubhekana nanoma iyiphi ingozi ngokushesha. Loku kudinga ukuthi zonke izinhlelo zamakhompyutha zikwazi ukubhekana nengozi yobuchwepheshe bamakhompuyutha. Lokhu kudinga ukuthi ukuhlanzwa kobuchwepheshe bamakhomuyutha abasebenzi kuqiniswe uhlelokusebenza lezikhiphamagciwane zokuvika ingozi evela ngaphandle.
Ukuvikela yonke imininingwane emqoka kufanele kube yingxenye yazo zonke izinhlangano ohlelweni lwazo lokulwa ne-COVID-19 kanti abasebenzi abasebenzela emakhaya kufanele bahlale baziswa ukuthi yini okufanele bayenze uma kunesimo esiphuthumayo sokuhlaselwa ngobuchwepheshe bamakhompuyutha.
Iphini leSekela-Shansela Liphawule Ngendawo Yokudla Kwesintu
Umfundi Wase-UKZN Uhlose Ukuphucula Indlela Yasesibhedlela Yokuhlola Umdlavuza
Abafundi Bezomthetho Bamele i-UKZN Kwingosi yokuxhumana ngobuchwepheshe YesiShayamthetho